GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Moore Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
ỌNWỤ na-esogharị anyị n’azụ ka anyị na-eme ihe ndị dịịrị anyị n’ụbọchị, n’agbanyeghị otú ahụ́ si gbasie anyị ike ma ọ bụ otú anyị baruru n’ọgaranya. Ọ pụrụ igbu anyị n’oge ọzọ anyị gafere n’okporo ámá ma ọ bụ dinara n’ihe ndina. Ọdachi ndị dị ka mwakpo ahụ ndị na-eyi ọha egwu mere na September 11, 2001, na New York City nakwa na Washington, D.C., na-eme ka anyị ghọtakwuo eziokwu ahụ bụ́ na “onye iro ikpeazụ,” bụ́ ọnwụ, na-egbu ndị na-arụ ụdị ọrụ nile nakwa ndị nọ n’afọ ndụ nile, mgbe ụfọdụ na-egbu ọtụtụ puku mmadụ n’ime minit ole na ole.—1 Ndị Kọrint 15:26.
N’agbanyeghị nke ahụ, o yiri ka ọnwụ ọ na-akpali mmasị ndị mmadụ. Ọ dịghị ihe yiri ka ọ ga-eme ka e repụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ mee ka ọtụtụ mmadụ kiriwe telivishọn karịa akụkọ banyere ọnwụ, karịsịa ọnwụ nke ìgwè mmadụ bụ́ ndị nwụrụ n’ọnọdụ ndị na-eyi egwu. O yiri ka akụkọ ya adịghị agwụ ndị mmadụ ike, ọ sọkwa ya ya bụrụ ọnwụ nke agha, ọdachi ndị na-emere onwe ha, mpụ, ma ọ bụ ọrịa kpatara. Ndị mmadụ na-egosipụta ụra a ọnwụ na-echu ha n’ụzọ kasị atụ n’anya site n’oké mmetụta ha na-egosipụta mgbe ndị a maara aha ha nwụrụ.
Ihe a nile bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ọnwụ—ọnwụ nke ndị ọzọ—anọgidewo na-akpali mmasị ndị mmadụ. Otú ọ dị, mgbe ha chere ọnwụ nke ha ihu, egwu ejichie ha. Ọnwụ nke anyị bụ isiokwu ihe ka ọtụtụ n’ime anyị na-achọghị ichetụ n’echiche.
Ọnwụ Ọ̀ Na-eju Gị Anya?
Anyị ichetụ n’echiche na anyị ga-anwụ adịghị mgbe ọ na-atọ anyị ụtọ, ọ dịghịkwa mgbe ọ ga-atọ anyị ụtọ. Gịnị mere o ji dị otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na Chineke ekenyewo anyị ọchịchọ siri ike nke ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. “Mgbe ebighị ebi ka O tinyeworo n’obi ha,” ka Eklisiastis 3:11 na-ekwu. Ya mere, mgbanahụ a na-apụghị ịgbanahụ ọnwụ emewo ka ụmụ mmadụ na-enwe oké nchegbu na obi nkoropụ na-adịghị akwụsị akwụsị. Iji mee ka oké nchegbu a kwụsị na iji mejuo ọchịchọ ha bu pụta ụwa nke ịnọgide na-adị ndụ, ụmụ mmadụ echepụtawo nkwenkwe dịgasị iche iche, site n’ozizi anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi ruo na nkwenkwe ịlọ ụwa.
Ka o sina dị, ọnwụ bụ ihe na-eyi egwu, egwu ọnwụ zukwara ebe nile. Ya mere, o kwesịghị iju anyị anya na ọha mmadụ n’ozuzu ha hụrụ ọnwụ dị ka atụmanya na-eme ka ike gwụ mmadụ. Otu ihe bụ na ọnwụ na-ekpughe oké ihe efu dị ná ndụ e mikpuru n’ịchụ akụ̀ na ụba na ikike.
Ọnwụ Ò Kewapụrụ Gị n’Ebe Ndị Ọzọ Nọ?
N’oge ndị gara aga, a na-ekwekarị ka onye na-arịa ọrịa ga-egbu ya ma ọ bụ onye merụrụ ahụ́ n’ụzọ dị oké njọ nwụọ n’ebe obibi ya bụ́ ebe ọ maara nke ọma ma nwee mmasị na ya. Otú ahụ ka a na-emekarị n’oge Bible, a ka na-emekwa otú ahụ n’ebe ụfọdụ. (Jenesis 49:1, 2, 33) N’ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ezinụlọ na-ezukọ ọnụ, ụmụaka na-esonyekwa ná mkparịta ụka. Nke a na-eme ka onye nke ọ bụla so n’ezinụlọ ahụ nwee mmetụta na ọ bụghị nanị ya na-eru újú, ọ na-emekwa ka obi ruo ya ala na ọ bụghị nanị ya bu ibu ahụ nakwa na ọ bụghị nanị ya ka mmadụ nwụnahụrụ.
Nke a dị nnọọ iche n’ihe na-eme n’ọha mmadụ ebe ikwurịta banyere ọnwụ bụ ihe a na-asọ nsọ, ebe e weere ya dị ka ihe na-eyi egwu, na ebe a na-adịghị ekwe ka ụmụaka soro na-ekwu ya n’ebumnobi na ha “agaghị ebuli” ihe dị na ya. Otú e si anwụ n’oge a dị iche n’ọtụtụ ụzọ, mmadụ na-anọkarịkwa nanị ya wee na-anwụ. Ọ bụ ezie na ihe ka n’ọnụ ọgụgụ ga-enwe mmasị ịnwụ n’ebe obibi ha, bụrụ ndị ezinụlọ ha ji udo na ịhụnanya lekọta, ihe ọjọọ na-adakwasị ọtụtụ ndị bụ na ha na-anwụ n’ụlọ ọgwụ, nanị ha na-anọkarị ka ha na-enwe ihe mgbu, bụrụ ndị a kwụnyejuru ọkpọka ígwè ọrụ ọgbara ọhụrụ ndị na-eyi egwu n’ahụ́. N’aka nke ọzọ, ọtụtụ nde mmadụ na-anwụ n’ụzọ a na-amaghị—ndị a na-amaghị ihu ha bụ́ ndị mgbukpọ agbụrụ, ụnwụ nri, ọrịa AIDS, agha obodo, ma ọ bụ ogbenye ọnụ ntụ riri isi ha.
Okwu A Ga-echebara Echiche
Bible adịghị emegide iche banyere ọnwụ. N’ezie, Eklisiastis 7:2 na-agwa anyị, sị: “Ọ dị mma ije n’ụlọ oruru újú, karịa ije n’ụlọ ọṅụṅụ mmanya vaịn: n’ihi na nke ahụ bụ nsọtụ mmadụ nile.” Mgbe ọnwụ gburu mmadụ, anyị pụrụ iwepụ ihe ndị na-echegbukarị anyị n’obi ma ọ bụ ghara ime ihe omume ndị anyị na-emekarị ma lekwasị anya n’ịdị mkpụmkpụ nke ndụ. Nke a pụrụ inyere anyị aka ibi ndụ anyị n’ụzọ ka nwee nzube kama ịdị na-ebi ya nnọọ n’ụzọ na-enweghị nzube ma ọ bụ ịdị na-ala ya n’iyi.
Gịnị bụ echiche gị banyere ọnwụ? Ì nyochawo mmetụta, nkwenkwe, olileanya, na egwu i nwere banyere ọgwụgwụ nke ndụ gị?
Dị ka ọ dị n’ihe banyere ndụ, ọnwụ karịrị ike mmadụ ịkọwa na ịghọta. Nanị onye pụrụ itinye ọnụ n’okwu a n’ụzọ a pụrụ ịdabere na ya bụ Onye Okike anyị. N’ebe ọ nọ ka “isi iyi ndụ” dị, ọ bụkwa ya “nwe ụzọ nile isi n’ọnwụ pụọ.” (Abụ Ọma 36:9; 68:20) Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi ihe na-eju anya, iji Okwu Chineke nyochaa nkwenkwe ụfọdụ a ma ama banyere ọnwụ ga-abụ ma ihe na-akasi obi ma ihe na-enye ume ọhụrụ. Ọ ga-ekpughe na ọnwụ abụchaghị nsọtụ nke ihe nile.
Eziokwu ahụ bụ́ na anyị pụrụ ịnwụ na-enyere anyị aka ibi ndụ anyị n’ụzọ ka nwee nzube